Historic Hotels Na Europe na otú Nweta E | Save A Train
Home > Travel Europe > Historic Hotels Na Europe na otú Nweta E
Historic hotels na Europe bụ bụghị a obere anya, karịsịa na nnukwu obodo na a ọgaranya akụkọ ihe mere. Paris, London, Rome, Munich, Vienna - niile nke obodo ndị a nwere ọmarịcha ebe na-enye. njem nleta onye na-achọsi ụfọdụ ọdịnala okomoko ga-enwe ihe isi ike na-achọta ebe a na-anọ na Europe. The akụkụ kasị mma banyere ya bụ na ị nwere ike ịga njem niile nke obodo ndia ụgbọ okporo ígwè, on a mmefu ego. Ebe a na-n'elu ise mbụk hotels na Europe na-esi n'ebe ahụ ụgbọ okporo ígwè:
1. Anyị na-amalite anyị ndepụta Historic Hotels na – The Ritz, Paris
Ọ dịghị ndepụta nke n'elu-akụkọ ihe mere eme hotels na Europe ga-ezu na-enweghị Paris. Otu pearl nke ya ile ọbịa ụlọ ọrụ guzo: The Ritz. The hotel obụrede mbụre a ọgaranya akụkọ ihe mere na a dara oké ọnụ ime na-aga na ya. Ọ e hiwere na 1898, na ọbụna mgbe bụ n'ọtụtụ kasị elu nke nkasi obi.
The Ritz bụ ndammana a na-ewu ewu nhọrọ maka ndị òtù European elu otu. Ụfọdụ n'ime ya ma ama ọbịa bụ Duke na Duchess nke Windsor, Coco Chanel, na Ernest Hemingway, n'etiti ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ inyocha ya na-adọrọ mmasị akụkọ ihe mere eme, ị pụrụ a ụgbọ okporo ígwè na Paris si ndị ọzọ isi European obodo ndị dị ka London, Rome, Amsterdam, ma ọ bụ Brussels.
Belmond Cadogan Hotel na London a na-ewere a boutique hotel, ma o nwere ihe a ogologo na-akpali akpali akụkọ ihe mere eme. Ụfọdụ na-asị na ọ bụ ọbụna dị ịrịba ama mgbe ụfọdụ, ka Oscar Wilde nọ na-echere ya njide e na 1895. The Cadogan nwere 64 ụlọ na a magburu onwe Edwardian ikuku. Ọ bụ akụkọ ihe mere eme townhouse, na ọ nọ na-a otutu nke pụrụ iche agwa nke oge. Ọ bụrụ na ị na-anyị mbụ nkwanye, ị pụrụ n'ụzọ dị mfe na-eme njem site na Paris na London ụgbọ okporo ígwè.
3. Albergo del naanị al arụsị, Rome
Mgbe ọ na-abịa mbụk hotels na Europe, Albergo del naanị al arụsị na Rome na-ewe achicha. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ochie hotels na ụwa, hiwere na 1467! Ụlọ na ileghara arụsị ndị kasị mma, mezue na Renaissance-style akwa na 17 na narị afọ frescos ka mma. Ọ na-adịghị ya mma ma ọ bụ karịa akụkọ ihe mere eme karịa na. Ọzọ bonus bụ na-ejegharị ejegharị na Rome bụ nnọọ mfe site na ụgbọ okporo ígwè, karịsịa malite na ndị ọzọ na isi Italian obodo.
The Torbrau malitere dị ka a ebe ike gwụrụ njem si Salzburg nwere a ike na a ezigbo biya. Ọ na-e-arụ ọrụ ruo ihe karịrị 500 afọ, na na ọ natara ya n'oge a ntaghari ohuru na '90s. The Torbrau bụ a mmasị nke azụmahịa njem na-eme njem nleta na-achọ a ọzọ maa mma akụkọ ihe mere eme hotel ahụmahụ. Ọ bụrụ na ị na-na na eleta Munich ụgbọ okporo ígwè site Berlin, Vienna ma ọ bụ ndị ọzọ European obodo, ị nwere ike ime atụmatụ ịnọ Torbrau.
The Grand Hotel Wien wuru na 1870, na naanị rụtụrụ ego nke oge dị ka a onwe obibi. Ọ bụ ndị kasị ochie nke "Ring Hotels" gburugburu Opera nke ebe Ringstrasse na Vienna. Dị ka akụkọ ihe mere eme na-aga, họtel hụrụ ya òkè nke ma obi ụtọ na obi mgbawa. Ọ bụ backdrop nke Mayerling omume nke n'ụzọ dị mwute, na ọnwụ nke Austrian Crown Prince Rudolf na ya n'anya, Baroness Marie Vetsera. Ọ bụrụ na akụkọ nwere ị mmasị, ị pụrụ ịgbakwunye Grand gị ndepụta nke mere ihe akụkọ hotels na Europe ileta. isi Vienna ụgbọ okporo ígwè si Munich, na a na-akwụsị na Salzburg.
Eleta Historic Hotels na Europe site Train Summary!
Ị na-achọ iji leta ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị akpali akụkọ ihe mere eme hotels na Europe? Atụmatụ njem gị site isi European obodo akwụkwọ ahụ gbaa ụgbọ okporo ígwè ka i e!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhistoric-hotels-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#hotel #hotels #Vienna europetravel Munich trainjourney ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel travelaustria travelfrance travelgermany travelparis travelrome